Apple Inoburitsa iOS 9.3.3, watchOS 2.2.2, uye OS X 10.11.6 Ine Zvishoma Kugadzirisa | IPhone nhau
Zvakanaka, tinazvo pano: Apple yatanga masikati ano iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 9.3.3. Kuburitswa uku kwakaitika vhiki mbiri mushure mekupedzisira beta, yechishanu, mushure memavhiki maviri akateedzana achiburitsa betas. Kunge iOS 9.3.2, iyo nyowani vhezheni yeIOS yaburitswa, kunze kwekushamisika kukuru uko kunowanikwa dzimwe nhau dzakatanhamara, kugadzirisa matambudziko nekukwirisa kumhanyisa uye kuvimbika kwesystem.
Kubva pane izvo isu zvatakakwanisa kuongorora mune mashanu mabetas akaburitswa, iOS 5 hongu izvo inoshanda zvirinani pane yapfuura vhezheni, asi hazvisi izvo zvinoratidza zvakanyanya. Rimwe rematambudziko neshanduro dzichangoburwa dzeIOS (iOS 8 uye iOS 9) nderekuti Apple yakanyora nzira kubva kumusoro kusvika pasi, chimwe chinhu chinoita sekunge chisingazoite muIOS 10. , chishandiso chaunofanirwa kubata ruzivo rwakawanda, uye pakupedzisira sisitimu inotambura. Hazvizivikanwe kana Apple icharegedza kunyorera kernel uye mimwe mifananidzo yeIOS 10 kana system ikaburitswa zviri pamutemo, asi vakatosimbisa kuti kuita izvi kunoderedza mashandiro.
iOS 9.3.3 inosvika kugadzirisa matambudziko uye kugadzirisa iyo system
Kunge chero kumwe kuvandudzwa kwepamutemo, iOS 9.3.3 iri pano inowanikwa kubva kuTunes uye kuburikidza neOTA. Kana ikasaoneka izvozvi, iva nemoyo murefu, nekuti dzimwe nguva zvinotora hafu yeawa kuti uone. Kune rimwe divi, zvinokurudzirwawo kumirira maawa mashoma usati waedza kugadzirisa nekuti mumaawa ekutanga kuti vhezheni itsva inowanikwa, maseva anoenda zvishoma zvishoma uye tinogona kusangana nerimwe dambudziko.
Izvo zvakare hazvikuvadze kuyeuka izvo Apple haisati yave 100% chaiyo mune yayo yazvino kuburitswa uye kuti kuve wekutanga kuisa iyi vhezheni nyowani tinogona zvakare kuve ivo vanoona kuti ine chakakomba chakakomba, saka, kuti upore, ndingakurudzira kumirira zvirinani kusvika mangwana panguva ino.
Uye kana iOS 9.3.3 isiri yekuburitsa kwakakurumbira, kana iwatchOS 2.2.2, mashandiro anoita akatoita mabetas mashoma kupfuura mamwe masisitimu uye akasvikawo kugadzirisa zvimwe zvikanganiso nekupolisha system, uye OS X 10.11.6. Zviripachena kuti kuvhurwa kukuru kweApple Watch kuchasvika munaGunyana neWatchOS 3 uye iyo Apple Watch 2? Semazuva ese, kana iwe watove wakaisa yekupedzisira vhezheni yeIOS 9.3.3, watchOS 2.2.2 kana OS X 10.11.6, usazeze kusiya zvako zviitiko kana nhau dzaungave iwe wakawana mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inoburitsa iOS 9.3.3, watchOS 2.2.2, uye OS X 10.11.6 ine zvigadziriso zvidiki
Wakaonekana nezvangu ...
Ngatione kuti luca tione kana vakavhara kusagadzikana.
Asi zvechokwadi vakaavhara, akazvitaura nguva pfupi yadarika; Apo uyo ane godo uye egocentric hacker paakaona kuti dzaive dzakavharwa, akaregedza zviitwa kuti aone kana mumwe munhu achizotora chishandiso, apo iye aive agona kuchigovana icho kwenguva yakareba.
Hazvichashandi kuvandudza zvinouya nekutadza, idzi shanduro dzakaratidza zvikanganiso zvakawanda uye vhidhiyo yekurekodha mu4k haina kurekodha mushe, mushure mekurekodha ine akati wandei masekondi echimedu chidimbu neadhiyo, ini handizive kana kana sero risina akatambura chero kukundikana, izvi zvinoitika ndega kwandiri mmmmm
Ndinofunga zvakaitika pakutenga iPhone zvimwe.
Ndinoona musikana wangu ane S7 uye ini ndinodonhedza 2 migomo yemvura ndichichema.
ñeñe. Kuchema kune imwe nzvimbo.